Zavatra hita any Milan | Vaovao momba ny dia
Tanàna tena tsara tarehy i Milan, nefa indraindray tsy afaka mifaninana amin'i Roma, Venise na i Florence, ka eo afara no jerena raha ny fizahana fizahana no jerena. Na izany aza, misy izany zavatra maro hita, mahatalanjona, ho raisina ho toy ny toeran-kaleha.
Milan no tanàna faharoa lehibe indrindra aorian'i Roma, ary ivon-indostrialy tena maoderina, miaraka amin'ny valindrihana feno lanitra, toa ilay tranobe malaza Pirelli. Na izany aza, manana arabe mahafinaritra ihany koa izy ao amin'ny faritra taloha ary mazava ho azy, misy katedraly malaza.
1 Duomo avy any Milan
2 Castle Sforzesco
3 Ny Sakafo hariva farany nataon'i Leonardo da Vinci
5 Faritra maitso any Milan
Duomo avy any Milan
Izany no ahafantarana ny katedraly ao an-tanàna, a katedraly manana endrika gothic marihina miaraka amin'ny tampon-tampona sy sarivongana avo izay manome endrika mampiavaka azy. Ny tendrony avo indrindra dia ny varahina varahina voaravaka antsoina hoe Madonnina. Ny efitranony dia efa mahavariana, miaraka amin'io biriky mitafy marbra io ary ny alok'izy ireo. Fa ny fitsangatsanganana ao anatiny dia manambara bebe kokoa momba ity katedraly ity. Ataovy ao an-tsaina rehefa miditra, fa ny fitsidihana azy dia tsy maintsy hosaronanao ny lohalinao ary misy zavatra eo an-tsorokao.
Ao anatin'ny katedraly ianao dia afaka mahita trano mitovy endrika sy lava be, satria izy io dia iray amin'ireo katedraly lehibe indrindra eto an-tany. Ny tsanganana lava misy sarivongana voasokitra dia hatreny amin'ny valindrihana. Misy sary hoso-doko koa eo amin'izy ireo izay mampiseho sary ara-pivavahana isan-karazany. Tena haharitra isika mankafy ny antsipiriany kanto rehetra an'ny Duomo. Tsara homarihina ihany koa fa ao ambadiky ny alitara, ao amin'ny vault, ny iray amin'ireo harena sarobidy indrindra dia voatahiry, hoho avy amin'ny Hazo fijalian'i Kristy, izay esorina amin'ny Sabotsy akaiky ny 14 septambra fotsiny.
Ny iray amin'ireo fitsidihana izay tsy tokony ho tarainao ao amin'ny katedraly dia ny an'ny teratany malalaky ivelany. Azonao atao ny miakatra ambony na miakatra amin'ny ascenseur miaraka amina frais fanampiny. Avy any ambony no ahitanao ny tampon'ny katedraly akaiky, ary koa ny fahitana ny tanàna. Ary raha liana amin'ny arkeolojia ianao, any amin'ny faritra ambany amin'ny katedraly dia misy ny fikarohana mba hitazonana ny taolan'ny katedraly taloha sy ny batista kristiana taloha.
Ity lapa ity dia natsangana ho trano mimanda tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary nohavaozina ho tranon'ny ducal avy amin'ny fianakavian'i Sforza. Taty aoriana dia nampiasaina ho an'ny tanjon'ny tafika izy ary rehefa noeritreretina ny fandravana azy dia namerina azy io ny mpanao maritrano iray. Amin'izao fotoana izao trano tranombakoka vitsivitsy, mba hahafahanao mitsidika ny atiny miaraka amin'izay koa mankafy fanangonana zavakanto sasany. Ao anatiny no misy ny tranombakoky ny zavakanto fahiny, izay ahitanao ny sanganasa farany nataon'i Michelangelo, ny Piedad Rondanini, asa tsy vita. Misy ihany koa ny galeran'ny sary, tranombakoka ejiptiana na prehistory.
Ny Sakafo hariva farany nataon'i Leonardo da Vinci
Ity dia iray amin'ireo sangan'asa malaza indrindra manerantany, ary eny, any Milan no misy azy. Izany dia eo amin'ny rindrin'ny efitrano fisakafoanana ny trano fitokanana taloha Santa Maria delle Grazie, izay no toerana voalohany nisy azy. Asa lehibe izy io, mihoatra ny valo metatra ny sakany, noforonina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Mazava ho azy, raha te hahita azy ianao dia mila mamandrika mialoha, noho izany dia iray amin'ireo zavatra tsy maintsy ataonao fandaharana amin'ny dia, mba hahafahantsika miditra amin'io andro io. Kely ireo vondrona ary manome dimy ambin'ny folo minitra ary tsy misy sary azo alaina.
Ity galeriana lehibe ity dia noforonina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Hall Hall. Toerana fivarotana izy io, izay misy ny fivarotana lehibe indrindra ary koa trano fisakafoanana sy kafe. Ny vazy lehibe manjelanjelatra dia mahagaga, izay manome ny galeriana fijery maoderina. Ho fanampin'izay, eto ianao dia afaka mahita orinasa toa an'i Prada na Gucci, miaraka amin'ireo orinasa manankarena hafa. Ho an'ireo paosy maotina kokoa dia toerana iray handehanana an-tongotra sy hisotroana amin'ny orinasa maro.
Faritra maitso any Milan
Rehefa sasatry ny mahita fiangonana, abbey ary faritra ara-barotra ao an-tanànan'i Milan isika, dia afaka mankany amin'ny iray amin'ireo toerana maitso misy azy. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny Sempione Park, izay eo akaikin'ny Sforzesco Castle ihany koa, ka afaka mahita roa isika amin'ny tolakandro tokana. Izy io dia valan-javaboary iray izay ankoatra ny habaka maintso dia afaka mahita tranobe vitsivitsy ianao. Ny Arco della Pace izay nanomboka namboarina ho fahatsiarovana ny fandresen'i Napoleon, na ny Arena Civica, toerana fampisehoana. Toerana handanianana sasatra vetivety izy io.
Etsy ankilany, misy koa ny Zaridainam-panjakana, izay ahitanao ny Palazzo Dugnani tamin'ny taonjato faha-XNUMX na ny Museum momba ny Tontolo Iainana voajanahary. Iray amin'ireo faritra maintso ao an-tanàna miala sasatra amin'ny tanàna, izay tsy fahita koa any Milan.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Italia » Zavatra hita any Milan
Fampahalalana hitsidihana ireo trano mimanda Loire avy any Paris